Shambadziro's Strategic Sale Inowanikwa yeLinux Vhidhiyo Mitambo | Linux Vakapindwa muropa
Yakaomesesa Strategy Yakatengeswa inowanikwawo kumitambo yemavhidhiyo yakaburitswa yeGNU / Linux, pamusoro pemazita anowanikwa eMicrosoft Windows uye Apple macOS. Ndokureva, isu tese tinoziva zvinoyemurika zvatinazvo pamitambo yemavhidhiyo iripo yePC pane Steam, pamwe nezvimwe zvakaderedzwa zvinosvika kusvika ku80% yehuwandu hwehuwandu hwemamwe mazita akabudirira eAAA mazita anowanikwa mune inozivikanwa chitoro chedhijitari cheValve. Chinhu chakajairika kwazvo muchitoro cheStam.
Asi ndezvekuti ikozvino yasvika pa 98% kuchengetedza, ndokuti, iwe uchangobhadhara 2% mune dzimwe nguva neichi promo sezvaungaona mu iyo yepamutemo fanatical webhusaiti. Izvi zvinoreva kuti ino inguva yakanaka kana ukaronga kutenga chero yemitambo yemavhidhiyo yakakanganiswa nechipo ichi, pakati payo pane mazita makuru kubva SEGA, Paradox, Slitherine, nezvimwe. Chipo chinokanganisa madhijitari evaraidzo edhijitari muchikamu chehurongwa, sezvaunogona kufungidzira ...
Mune iyi link yandakasiya kubva kuFanatical iwe unozogona kutarisa kune zvinopihwa zvemamwe mazita chaiwo, maunogona kutenga sevhisi kwemama euro mashoma uye kuwana mamwe zvaunopa kuti uwane dhisikaundi pane Steam ne "kadhi" rawakatenga. Semuenzaniso, fanatical's Strategy Bundle inodhura € 1,99 ine 98% dhisikaundi pane aya mazita iwe aunogona kutenga pane Steam. Tora mukana wezvibodzwa izvi uye unakirwe muzhizha rino.
Asi havazi ivo chete vanobvisa, iwe uchaona nhamba huru ye "makadhi" (yekuvasheedza neimwe nzira) iyo yaunogona kutenga paFanatical nezvikwereti zvinobva pa20% mune dzimwe nguva kusvika pa75% mune vamwe kana kupfuura, sezvataona. Mamwe mazita aunogona kuwana pakutengesa ichave Warhammer 40000 Aramageddon Bundle ye € 16,59, Europa Universalis, Cities Skylines, Stellaris, uye mamwe mazita auchaziva kana iwe uchitevera LxA kazhinji, sezvo isu takatsaurira zvinyorwa zvinoverengeka kwavari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Fanatical's Strategy Kutengesa kunowanikwa kweLinux mitambo yemavhidhiyo